Kurume 01, 2021
Mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemusi weMuvhuro vakarerutsa mimwe mitemo yaiva yakaiswa kudzivirira chirwere cheCovid 19 asi zvimwe zvakadai sezvikoro nemabhawa zvicharamba zvakavharwa.
VaMnangagwa vakabvumidza makambani pamwe nevanobata mabasa emaoko kuti vachivhura asi vakati vanofanirwa kutevedzera zviga zvakaiswa neWorld Health Organisation zvinodzivirira kupararira kwedenda reCovid-19.
Vatiwo vanhu vave kukwanisa kufamba zvakasununguka pasina tsamba dzekufambisa.
VaMnangagwa vakati kufamba pakati pemadhorobha kwave kubvumidzwa asi vachiti vemabhazi vanofanirwa kuona kuti vashandisa mishonga inouraya hutachiona, kuona kuti vafambi vakapfeka mamask nezvimwe zvinotarisirwa kuderedza kupararira kwehutachiona.
Ndufu dzicharamba dzichipindwa nevanhu makumi matatu uye mamwe magungano abvumidziwa asi vanhu vasingadariki makumi mashanu.
Vawedzerawo nguva yekuvhurwa kwezvitoro kubva panguva dza8 mangwanani kusvika panguva dza7 manheru asi vakati nzvimbo dzekudyira kunyangwe dzavhurwa vanhu havafanirwi kudyira ipapo.
VaMnangagwa vakarerutsa nguva dzekuti vanhu vasafambe fambe kana kuti curfew kubva panguva dza 5.30 mangwanani kusvika 10 husiku. Vakatiwo zvikoro zvigadzirire kuvhura kunyangwe vasina kupa nguva inotarisirwa kuti vachavhura. Asi VaMnangagwa vakati mabhawa nemanight club acharamba akavharwa.
Nyanzvi munyaya dzvehutano uye vaimbove gurukota rezvehutano Dr Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti kurerutswa kwaitwa nemutungamiriri wenyika kwanaka zvikuru sezvo zvichibatsira kuti vanhu vasaziye nenzara vari mudzimba. Asiwo vakakurudzira kuti vanhu vatore matanho ekuzvidzivirira kubva kudenda reCovid 19.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi, VaNyasha Muchichwa vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vati kuvhurwa kwezvimwe zvikamu zvenyika kuchabatsira kusimudzira nyika.
VaMuchichwa vati kubvumidziwa kwevanhu kuti vaende kumabasa vachitevedzera zviga zveWHO kuchaitawo kuti vanhu vanoda rubatsiro rwehurumende vashomeke.
Mutungamiri webato reLabour Economists and African Democrats, Muzvare Linda Masarira vatiwo vafadzwa nekunyevenutswa kwemitemo iyi vakati vanhu vave kukwanisa kunotsvaka zvekuriritira mhuri vachiti vanhu vanga vatambura zvakanyanya.
Mutevedzeri wemutauriri weMDC Alliance VaClifford Hlatshwayo vaudza Studio 7 kuti zvaitwa nemutungamiriri wenyika izvi ndozvaigarotaurwa nebato ravo kuti nyika isangovharwa yese pasina kucherechedzwa kuti nzvimbo dzakawanda zvirwere ndedzipi.
Vamwe vagari vemuHarare vataurawo neStudio 7 vatiwo kurerutswa kwemitemo iyi kunovabatsira kuti vakwanise kutsvaka chouviri vakatiwo itarisiro yavo yekuti chero hurumende ikatora danho iri, ichabatsira veruzhinji vanga vave nenguva refu varimudzimba.
Zimbabwe yakaenda paLevel 4 yeLockdown musi wa5 Ndira mushure mekunge huwandu hwevanhu vaibatwa nekufa neCovid-19 hwakwira zvakanyanya.